Uyashiya ebuholini oyoqedela izifundo | IOL Isolezwe
Uyashiya ebuholini oyoqedela izifundo
Isolezwe / 13 July 2012, 4:10pm /
INKOSI UMPIYEZINTOMBI MZIMELA
IPHINI likasihlalo wendlu yobuHoli boMdabu KwaZulu-Natal, iNkosi uMpiyezintombi Mzimela, uthi usezibeka phansi izintambo ebuholini ukuze akwazi ukuyoqhubeka ne-PHD yakhe e-University of KwaZulu-Natal emkhakheni wezeNtuthuko.
UMzimela ukusho lokhu ephawula ngokuhlulwa kwakhe okhethweni lwesifunda sasoThungulu esikhundleni sokuba ngusihlalo weNdlu yobuHoli boMdabu kuleya ndawo nalapho ehoxe khona ngomzuzu wokugcina kwathatha inkosi uVictoria Dube.
“Empeleni angilungenelanga ukhetho kodwa bekunesivumelwano ebesisenzile oThungulu ekutheni kukhethwe inkosi yakwaBiyela ekutheni ibuyele kulesi sikhundla ngoba yiyo ebisiphethe. UBiyela uhoxile ekungeneleni lolu khetho sabe sesivumelana ngokuthi akukhethwe inkosi uDube ongumuntu wesifazane nokuyinto esiyenze ngokukhulu ukukhululeka,” kusho uMzimela.
Uthe indaba yakhe kube wukuthi kunamakhosi ayekade engekho emhlanganweni ababenawo wokuthi kubuyiselwe uBiyela esikhundleni nokuthe uma efika kulolu khetho lwangoLwesibili avele aphakamisa igama lakhe engazi nokuyinto asheshe wayilungisa watshela abakwa-Independent Electoral Commision ukuthi akalungeneli lolu khetho.
“Mina bengingalungenelanga ukhetho futhi okungixakayo yilokhu kokuthi ngibizwe ngomuntu we-IFP ekubeni ngingakaze ngoba mina angihlanganise lutho nezepolitiki noma ne-IFP kodwa ngiyisishoshovu sobukhosi,” kusho uMzimela.
Uthe lolu khetho lufike bengalulindele njengoba bebazi ukuthi luzoba ngo-2014 kodwa babona sekuthiwa kuyavotwa.
Ethinta izifundo zakhe uthe usebhalise uqedile e-UKZN ukuyokwenza izifundo zakhe ezithinta umkhakha wezentuthuko njengoba ebevele eneMasters kuwo.
Uthe uzoqala maduze kanti useshiya kuzo zonke izinhlaka zobuholi bomdabu ngaphandle kwesikhundla sakhe sobukhosi bakwaMzimela ngoba asimthwesi inkinga.
Uveze ukuthi usebeyilungu leNdlu yabaHoli boMdabu iminyaka engu-15 kanti usebeyiphini likasihlalo iminyaka engu-17 yingakho esefuna ukuthatha ithuba lokuyophumula abhekane nezifundo zakhe.
Uthe oThungulu ukhetho lwakhona luhambe kahle ngoba ibingekho ipolitiki nokugxambukela kwabaholi bezombusazwe.